Himalaya Dainik » अञ्जु पन्तकी छोरी परितोषिका भन्छिन्- ‘ममी अब विबाह गर्नुस्’
हालै एक म्यूजिक भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतको बोल हो ‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गाह्रो हुन्छ’ । जसमा स्वर तथा संगीत अञ्जु पन्तले भरेकी छिन् भने छोरी परितोषिकाले अभिनय गरेकी छिन् ।
आफ्नो विवाहप्रति छोरी परितोषिकाले भनिन् ‘सधैं त म ममीसँग हुन सक्दिनँ । त्यसैले त मैले ममीलाई जीवनसाथी खोज्न बारम्बार आग्रह गरेको छु ।’ अञ्जुलाई छोरीले नै बिहेका लागि स्वीकृति र दबाब दिएकी छिन् ।
छोरीले बिहे गर्नैपर्छ भनेर प्रेसर दिइरहेकी छिन् । तर, मेरो सोच बिहे नै नगर्ने हो । यो मेरो इच्छा नै नभएको कुरा हो । तर, मलाई धेरैले बिहेका लागि सुझाव दिइरहनु भएको छ।’ अञ्जुलाई अहिलेसम्म बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोच त आएको छैन । तर, भोलिको दिनमा भइहाल्यो भने पनि उनी स्वीकार गर्ने पक्षमा छिन् । आफूलाई बुझ्ने, नबदलिने प्रेम गर्ने मानिस आएको खण्डमा अञ्जु बिहे स्विकार गर्ने सोचमा छिन् ।
परितोषिका सानै हुँदा अञ्जु र मनोज राजको डि-भोर्स भयो । परितोषिकाले बाबुको अभाव महसुस गरिन् त ? भन्ने प्रश्नमा परितोषिकाले भनिन् ‘बच्चामा कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो नै ।
किन आमा जस्तै गायिका बन्ने सोच नराखेको ? भन्ने प्रश्नमा परितोषिका भन्छिन् ‘मेरो गीत गाउने रहर मात्र हो । म ममीको सफलतालाई भेट्न सक्दिनँ ।उहाँ जस्तो दोश्रो कोही जन्मिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसैले पनि रहरका लागि मात्र आउनु भन्दा नआउनु नै ठीक लाग्यो । म मोडलिङमा नै केही गर्न चाहान्छु ।’